I-Beach Shack Central Point Lookout
I-Snappers on Straddie iyi-boutique 5 unit complex enkabeni ye-'Old Point' ebekwe maqondana nesiteshi sebhasi futhi ibanga elilula lokuhamba lamabhishi abalulekile (i-Cylinder, i-Deadman's, i-Frenchman's, i-South Gorge ne-Main) kanye nokuhamba kancane ukuya. isitolo se-Gelati noma sika-Bob (I-Foodworks) salokho kudla. Kunesango labahamba ngezinyawo kwesokudla sendawo elinikeza ukufinyelela endaweni ekhululekile eqonda olwandle lwaseFranceman's kanye neDeadman's ngethrekhi yeWhale. Impahla inomuzwa okhululekile wolwandle ngenkathi ikunikeza konke ozokudinga ukuze ujabulele isikhathi sakho ungekho. Kutholakala kalula indawo yokupaka emgwaqweni yamahhala. Izingadi zethu zitshalwe zinezitshalo zomdabu ezingaphezu kuka-500 ezikhanga izinyoni, uvemvane nezinyosi. Iyunithi ngayinye ine-air-conditioning kanye nedekhi yangasese noma indawo yegceke okuhlanganisa izoso ezinikezelwe nezihlalo zangasese. Kunengadi enhle enomgodi wokucisha umlilo wokuphumula.Sisebenzisa imikhiqizo ehambisana nemvelo futhi esimeme kuwo wonke amayunithi futhi sihlinzeka ngezinsiza zokugaywa kabusha.
Ifulethi ngalinye lizizwa liyimfihlo futhi lihlanganisa igumbi lokuphumula eline-futon sofa, ikhishi elihlome ngokuphelele, igumbi lokugezela elinendlu yangasese neshawa kanye negumbi lokulala elinombhede wendlovukazi. Iyunithi ngayinye ine-air-conditioning kanye nedekhi yangasese noma indawo yegceke enesici esineqabunga elikhululekile futhi ihlanganisa izoso ezizinikele kanye nezihlalo. Kukhona ishawa yangaphandle ebekwe kahle enamanzi ashisayo nabandayo ozoyiwasha ngemva kosuku olwandle. Eduze kweshawa yangaphandle kukhona elondolo elinomshini wokuwasha nokomisa ukuze kusetshenziswe izivakashi. Ebusuku obubandayo kunendawo yokucima umlilo engadini yangaphambili ukuze ujabulele.
Umakhelwane 'indawo endala' etholakala ngaphezu kolwandle lwase-Deadman kanye nolwandle lwase-Frenchman. Indawo inomlando we-Long Island ohlinzekwa (ngamafuphi) kuyunithi ngayinye ye-nostalgia yakho. Yonke into e-Point Lookout iyahambeka ukusuka lapha futhi ufinyelele kalula ngamasango aseceleni amathrekhi okufinyelela olwandle